Radio Don Bosco - Izay manao ny sitra-pon'ny Raiko...
Raha faritana tsotra ny finoana dia hoe firaiketam-po amin'Andriamanitra, fanokanana ny tenana sy ny fiainana manontolo ho an'Andriamanitra. Tsy teny tsara lahatra, na asan'ny saina, fa toe-piainana. Teny sy finoana arahan'asa no ilaina, vavaka ampiharina eo amin'ny fiainana no famonjena. Izay mandray ny teny ka mitandrina azy, hoy i Jesoa, dia hendry. Izany hoe : sady mahay miaina ny ankehitriny, no manorina ny ho avy. Orana sy tafio-drivotra no ho fitsarana ny fanorenana sy ny fiorenana, izay mari-pototra dia tsy hihontsona.
Kianin'i Jesoa matetika ny toetran'ny Farisianina, izay mety hahavoa ny kristianina ihany koa, milaza fotsiny fa tsy manao : kobaka am-bava sy volana an-tenda, kabary ambony vavahady. Toy ny hoe, ny rindrina atao akora vato nefa ny fototra fasika ihany. Tsy hateza izany fanorenana izany, hirodana ka ho loza ny fihafarany ary fahaverezana. Teny zato, kabary arivo fa tokana ny marina dia izay arahina asa. Efa ampianarin'i Masindahy Paoly ao amin'ny 1 Kor. 4, 20 ny hoe : "Ny Fanjakan'Andriamanitra, tsy teny foana fa asa atao". Amen.